पेरिसडाँडामा बल्ल फर्कियो गुलजार
वीरेन्द्र ओली आइतबार, असोज ४, २०७७, २१:२७
काठमाडौं- पार्टी एकतापछि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडाको रौनक हराएको थियो। पार्टी गतिविधि कि तत्कालीन नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीबाट भयो कि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा।
आइतबार बिहान एकाएक गुलजार भयो। कारण थियो, नेकपा सचिवालयको बैठक। पेसिसडाँडाले एकीकृत नेकपा सचिवालयको बैठक राख्ने अवसर पहिलोपटक पाएको थियो। आइतबार कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ सहित सचिवालयका अरु सदस्यहरु निर्धारित समयमै बैठक हलभित्र प्रवेश गरिसकेका थिए। पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही समय ढिलो गरी पुगे। प्रधानमन्त्री ओली ११ : २० मा पेरिसडाँडा प्रवेश गर्दा सुरक्षाकर्मी र पार्टी कार्यकर्ताले खचाखच भइसकेको थियो।
सचिवालय बैठक हुने भएपछि सुरक्षाकर्मीले सबैलाई पार्टी कार्यालय बाहिरै रोकेका थिए। ०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता भयो। त्यसयताकै यो पहिलो चहलपहल थियो। पेरिसडाँडामा सचिवालय बाहेकका नेकपा नेता कार्यकर्ता थिए, विशेष गरी पूर्व माओवादी केन्द्री निकट नेताकार्यकर्ताहरुको उपस्थिति बाक्लो थियो। उनीहरु मध्ये केही शीर्ष नेताहरुसँग भेटघाट हुने अपेक्षासहित पुगेका थिए भने केही उक्त कार्यालयसँग रहेको भावनात्मक सम्बन्धका कारण।
चैतमा लकडाउन भएपछि बन्द भएको पेरिसडाँडाको खाजा पसलसमेत बन्द थियो। तर, आइतबार बिहानैदेखि उक्त पसल र वरिपरिका अरु पसल पनि खुले।
पेरिसडाँडालाई अपनत्व बनाइराख्न र रौनक कायम गर्न केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही भएपनि जनवर्गीय संगठनको कार्यालय यहीँ छ। तर, जनवर्गीय संगठनहरुमध्ये कतिमा एकता समेत हुन सकेको छैन भने कतिमा भावनात्मक एकतामा कमी छ। त्यसैले नियमित बैठक हुन सकेका छैनन्। जसले गर्दा पेरिसडाँडा पार्टी एकतापछि सुनसान बनेको थियो।
पार्टी अध्यक्ष ओली र प्रचण्डसहित सचिवालय सदस्यको कार्यकक्ष पेरिसडाँडा र धुम्बाराही दुवैतिर राखिएको छ। तर, अध्यक्ष प्रचण्डसहित पूर्व माओवादी केन्द्रका सचिवालयका सदस्य पेरिसडाँडा बेलामौका झुल्किने गरेका छन्। तर, अध्यक्ष ओली भने पेरिसडाँडामा यो समेत गरी जम्मा दुईपल्ट पुगे। ०७५ जेठ ३ गते एकता भएको दोस्रो दिन ४ गते ओली र प्रचण्डले पेरिसडाँडा पुगेर कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए।
आइतबार ओलीले सचिवालय बैठकमा सहभागी हुन पेरिसडाँडा पार्टी कार्यालयमा सहभागिता जनाएका छन्। पेरिसडाँडा नै सचिवालय बैठक किन राखियो भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले धुम्बाराही र पेरिसडाँडा दुवै आफ्नै पार्टीको कार्यालय भएकाले त्यस्तो कुनै अर्थ नभएको जिकिर गरे। ‘पार्टी एकता भएपछि पेसिडाँडा र धुम्वाराहीमा पार्टी कार्यालय बनाएका छौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘दुवै आफ्नै पार्टी कार्यालय भएपछि जता अनुकुल हुन्छ त्यतै बैठक बस्छ।’
आइतबार बसेको सचिवालय बैठकलाई धेरै नेता कार्यकर्ताले अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन्। विभाजित हुनबाट जोगिएको पार्टीलाई एकताको सन्देश दिन र नेता कार्यकर्तालाई भावनात्मक रुपमा नजिक बनाउन पेरिसडाँडा राखिएको नेताहरु बताउँछन्।
आइतबार पेरिसडाँडा पुग्नेहरुमा पूर्व माओवादी निकट हाल युवा संघका नेता पुष्प ओली पनि थिए। उनी भन्दै थिए, ‘यसले कार्यकर्तामा पार्टी एकता बलियो भएको सन्देश प्रवाह गरेको छ।’
केही समय शीर्ष नेताहरुमा आएको विभाजनले पार्टी एकता भाँडिने हो कि भन्ने सन्देह नेकपा कार्यकर्तामा थियो। नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यही खालको सन्देश समेत प्रवाह गरिरहेका थिए। तर, कार्यदल बनाएर साझा एजेन्डा तय गर्दै अन्तरसंघर्षलाई टुंग्याइयो। त्यसपछि यहाँ बैठक राखिएको हो। यसले कार्यकर्तामा रहेको सन्देह केही हदसम्म घटाएको पनि युवा संघका नेता ओलीको बुझाइ छ।
यसरी पुग्यो पेरिसडाँडा बैठक
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यही चलाखी गरेका हुन्। धेरै महिना चलेको अन्तरसंघर्षमा पूर्व माओवादी केन्द्र निकट कार्यकर्ता चिढिएको हुन सक्ने उनले बुझेका थिए।
नेकपा एकता भएदेखि नै सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दै आएको थियो। त्यति मात्रै होइन, यसअघिको स्थायी कमिटी र पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकसमेत प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै बसेको थियो। प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारलाई पार्टी कार्यालय बनाएको भन्दै आलोचना पनि चुलिँदै गएको थियो।
भेटघाटकै बीच गत भदौ ३१ गते अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ सहित महासचिव विष्णु पौडेल सचिवालय बैठकमा पेस हुने एजेन्डाकै विषय छलफल गर्न बालुवाटारमै पुगेका थिए। सोही छलफलमा प्रचण्डले पार्टी बैठक बालुवाटारमा राख्दा निकै आलोचना भएको भन्दै पार्टी कार्यालयमै राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी कार्यालयमै बैठक राख्ने भए पेरिसडाँडामै राख्दा उपयुक्त हुने बताएका थिए।
नेकपा सचिवालय बैठक पेरिसडाँडामा असोज २ गते बस्ने मितिको तय भदौ ३१ गते नै भएको थियो। त्यसै दिनदेखि नै पूर्व माओवादी नेताहरुमा एक प्रकारको खुसीको सञ्चार भएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफू संविधान दिवसको तयारीमा जुट्नु पर्ने भएकाले २ गतेको सचिवालय बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जनाउ दिए।
पहिलोपटक पेरिसडाँडामा हुन लागेको सचिवालय बैठकमा पहिलो वरीयताका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्रीसमेत सहभागी हुन सक्ने भएपछि अन्तमा स्थगित गरिएको थियो। सचिवालय बैठक सोमबार पनि पेरिसडाँडामै बस्नेछ।
नेपाल लाइभका वरिष्ठ संवाददाता ओली राजनीतिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
पूर्वसभामुखहरू भन्छन्- राष्ट्रियसभा अन्त्य गरेर जनताको मुख थुन्ने काम भयो
सरकार नै पार्टीको काममा
ओली र प्रचण्ड-नेपाल पक्षको तानातानमा नेकपा नेता-कार्यकर्ता
सरकारविरोधी आन्दोलन थप प्रभावकारी बनाउने प्रचण्ड-नेपाल पक्षको निर्णय बैठकले माघ १६ गते काठमाडौमा उपत्यका स्तरको आमसभा गर्ने निर्णय भएको छ। यस्तै अरु विरोधका कार्यक्रम यसअघि निर्धारण गरिएकाले थप प्रभावक... शुक्रबार, माघ २, २०७७
प्रचण्ड–माधव समूहले ओलीलाई गर्‍यो बर्खास्त! बिहीबार एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्ने संकेत गर... शुक्रबार, माघ २, २०७७
युकेएआइडीले राष्ट्र बैंकलाई आरटिजिएस सिस्टम र मोडुलर डाटा सेन्टर हस्तान्तरण शुक्रबार, माघ २, २०७७
सर्वोच्चको दाबी : न्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीच भेट भएको छैन शुक्रबार, माघ २, २०७७
'नागरिक एप' सार्वजनिक, परीक्षणकालमा ९ किसिमका सेवा शुक्रबार, माघ २, २०७७
सटकट खबर [२९ पुस २०७७] बुधबार, पुस २९, २०७७
नेम्वाङलाई ‘विदुर’ बन्ने अवसर डिबी खड्का
भ्याक्सिन लगाउँदाकाे अनुभव सोमबार, पुस २७, २०७७
जो भन्यो उही न्यायाधीश चाहिने भए किन चाहियो अदालत? शनिबार, पुस २५, २०७७